Social Media | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Social Media n'ihi na ọtụtụ obere ulo oru bụ a na-eri-irè ahịa ngwá ọrụ nke nwere ike inyere na-eto eto otu aha ude, online ọnụnọ na ndị ahịa iguzosi ike n'ihe. Agbanyeghị, ọ bụghị slam dunk ma ọ bụ ngwa ngwa-fix na mindset anyị ji agakwuru ya ga-emetụta ọganiihu anyị ma ọ bụ ọdịda anyị.
09/23/2021 08:20 elekere GMT
ebe elekọta mmadụ media na-abịakwute n'otu ụzọ ahụ dị ka mgbasa ozi ọdịnala, na-eche akwụkwọ akụkọ na mgbasa ozi magazin, bọọdụ mkpọsa na ihe ndị yiri ya, ọ ga-abụrịrị mbibi nke ọdịda. Omenala mgbasa ozi nwere ọnọdụ ya na atụmatụ azụmaahịa anyị dum, mana ọ bụghị usoro anyị kwesịrị iji mgbe anyị na-ekekọrịta elekọta mmadụ media.
elekọta mmadụ media choro ngbanwe nke puru iche na uzo anyi si eche banyere iru ndi anyi choro. Kama ịgwa na ire, enyemaka ya na inye ya - yana ihe gbasara ndị na-ege anyị ntị.
Iwu ụlọ na ntọala siri ike
Iji usoro mgbasa ozi iji nyere aka zụlite ma tolite akara na ntanetị na ntanetị chọrọ nghọta nke usoro ndị a iji wuo ntọala siri ike:
Ọrụ ndị na-elekọta mmadụ nwere ike ịrụ na atụmatụ ahịa gị na atụmatụ ụlọ gị. (akụkụ nke atụmatụ zuru ezu, ọ bụghị dum)
Mkpa inwe profaịlụ zuru oke na netwọkụ ọ bụla ị na-arụ ọrụ na ya. (imepụta ezigbo mbụ, ma na-aga n'ihu, mmetụta)
Ndị ị na-ege ntị ị na-atụ anya iru na ebe ha nọ n'ịntanetị. (netwọkụ mmekọrịta (s) dabara maka azụmaahịa gị)
Ọdịnaya ndị na-ege gị ntị ga-ahụ na-atọ ụtọ, aka na / ma ọ bụ ọnụ ahịa na netwọkụ ị họọrọ ịhọrọ ịnọ. (ihe kwesịrị ekwesị, ọdịnaya dị mkpa maka ndị na-ege gị ntị)
Ugboro ole ịkwesịrị ịkekọrịta ọdịnaya. (olu na usoro nke ịkekọrịta ọdịnaya, iji pụta na akụkọ nke ndị na-ege gị ntị)
Enwe ego na-aga n'ihu chọrọ ka ịmalite, na-abịarute ma na-ewu ndị na-ege gị ntị na akara ogologo oge. (oge, ego, akụrụngwa na ike mmadụ)
Mkpa ọ dị itinye aka na ya, ọtụtụ mgbe kwa ụbọchị, na ịkekọrịta, nyocha na ịzaghachi. (na-arụ ọrụ, ọ bụghị 'ịtọ ya ma chefuo ya')
Tozọ iji wulite Fans, ndị na-eso ụzọ yana njikọ sitere na ndị na-ege gị ntị. (na-eto eto bara uru nọmba)
Wayszọ ndị ị ga - esi nyere aka mee ka ọ dịrị ndị na - ege gị ntị mfe ịchọta gị na netwọkụ mmekọrịta. (na-enyere ndị mmadụ aka ịchọta gị n'ịntanetị)
Mkpa gị website na otu esi eji soshal midia na-ebugharị okporo ụzọ ebe ahụ. (nke gi website dị ka ehiwe nke ọnụnọ gị n'ịntanetị)
Eziokwu banyere akara gị, ngwaahịa, ọrụ na ọrụ ndị ahịa, n'anya ndị ahịa gị na ndị ọzọ. (otu aha gị ga - esi kwado ma ọ bụ mebie ihe ị na - eme na mgbasa ozi)
Ihe Omume Anyị na Ọnụ Ọgụgụ
Tọ ntọala maka ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya na nghọtahie dị mfe. Ọchịchọ anyị na-eche banyere nọmba nwere ike iduga anyị ịtụle ụzọ iji wulite ntọala nke ndị na-akwado anyị na ndị na-eso ụzọ na-ebute ọnụọgụ na-enweghị isi. N'oge gara aga, nke a nwere ike ịpụta Facebook mgbasa ozi sneaky, na-enweghị njikọ na azụmaahịa anyị ma anaghị elekwasị anya na ndị na-ege anyị ntị, ezubere iji mee ka ndị mmadụ nwee mmasị na Facebook Page ma bulie ọnụ ọgụgụ ndị na-akwado anyị. Maka Twitter ọ pụtara, ma ka pụtara, atụmatụ nke mere anyị ji azụ ndị na-eso Twitter, ha niile iji bulie ọnụọgụ anyị ma nye anyị ọdịdị nke ihe ịga nke ọma.
Ọtụtụ mgbe ndị a zụtara ofufe / eso ụzọ nọmba na-anọchi anya ndị mmadụ n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa na-enweghị mmasị ọ bụla bụla anyị na ngwaahịa na ọrụ, hapụdị ọdịnaya anyị na-ede na ntanetị. Ma hey, ọ dị mma. N'ime oge na ka mgbasa ozi mmekọrịta na-aga n'ihu na-eto, ọtụtụ n'ime anyị amatala na ndị a 'zụtara' Fans na ndị na-eso ụzọ enweghị isi mgbe ọ bịara n'ịzụlite akara ntanetị na azụmahịa anyị.
Mgbasa mgbasa ozi na-achọ mgbalị na-agbanwe agbanwe na ntinye oge dị ogologo nke na-elekwasị anya na ọchịchọ na mkpa nke ndị anyị rutere na ndị anyị na-atụ anya iru. Ọ nwere ike inye aka wulite aha njirimara, wusie aha anyị ike ma bulie iguzosi ike n'ihe ndị ahịa maka ndị mbido. Ọ bụghị ngwa ngwa kama ọ na-enye ọtụtụ ndị dị njikere ịkwụ ụgwọ ahụ ọtụtụ ohere.
Agbalịla Ime ya niile
Mgbe ị na-enyocha netwọkụ mmekọrịta nke ga-arụ ọrụ kacha mma maka azụmaahịa gị, cheta echiche "ihe pere mpe". Ezie na ụfọdụ azụmaahịa nwere akụrụngwa (ndị mmadụ, oge, ego) iji jikwaa ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta, ọtụtụ azụmaahịa pere mpe anaghị eme ya. Ọ ka mma ịhọrọ ụfọdụ netwọkụ dị mkpa maka azụmahịa gị, ma jikwaa ha nke ọma, karịa ịnwa ịnọnyere ọtụtụ ndị dị iche iche, ma jikwaa ha nke ọma.
Mgbasa mgbasa ozi site na Sue Cockburn